फोरम र नयाँ शक्ति जोडिएपछि, समाजवादी पाटी बन्यो, २५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन – Online National Network
फोरम र नयाँ शक्ति जोडिएपछि, समाजवादी पाटी बन्यो, २५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन
२४ बैशाख २०७६, मंगलवार ०२:५९
काठमाडौं, २४ वैशाख – संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता भएको छ। लामो समयको छलफल र बहसलाई अन्तिम रुप दिँदै दुई दल एक भएका हुन्। सोमबार राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रमबाट दुई पार्टीले एकताको घोषणा गरे। नयाँ पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपालु रहेको छ।
सभामा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नौ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। एकतापछि नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नयाँ पार्टीको अध्यक्ष रहनेछन्। यो पार्टी हिमाल पहाड र मधेसलाई नेतृत्व गर्ने सक्षम पार्टी भएको सहमति पत्रमा भनिएको छ।
पार्टीमा २५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरिएको छ। जस अन्तर्गत डा.बाबुराम भट्टराई संघिय परिषद् अध्यक्ष र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेका छन्। त्यस्तै अशोक राई पार्टीका वरिष्ठ नेता चयन भएका छन् भने राजेन्द्र श्रेष्ठ सह अध्यक्ष चयन भएका छन्।
पार्टी उपाध्यक्षमा नमराज सुवेदी, लालबाबु राउत, हिशिला यमि, रेनु यादव, रकम चेम्जोङ, परशुराम खापुङ, युबराज कार्की र हेमराज राई चयन भएका छन्। त्यस्तै महासचिवमा गगा नारायण श्रेष्ठ, रणधज कन्दघा र रामसाहायक यादव चयन भएका छन्।डम्बर खतिवडा, दानबहादुर विश्वकर्मा र प्रकाश अधिकारी पार्टीको उप महसचिवमा चयन भएका छन्।
त्यस्तै पा्टीको सचिवमा मोहमद इस्तियाक राई, दुर्गा सोब, विजय यादव, परशुराम बस्नेत र प्रशान्त सिह चयन भएका छन्। अन्य २ जना सचिवपछि मात्र थपिने समाजवादीका एक नेताले बताए। — अन्नपूर्ण दैनिक